IGAD iyo Midowga Afrika oo ka hadlay weerarkii saldhigga ATMIS | KEYDMEDIA ENGLISH
IGAD iyo Midowga Afrika oo ka hadlay weerarkii saldhigga ATMIS
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka. Kooxdan fallaagada ah ee xiriirka la leh argagixisada al-Qaacida, ayaa weeraro badan oo dhimasho iyo dhaawac leh ku qaaday saldhigyada Midowga Afrika ee Soomaaliya.
JABUUTI - Urur goboleedka IGAD, ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka argagaxiso ee ay ku qaadeen Ciidamada Burundi ee qaybta ka ah hawlgalka Midowga Afrika ee ATMIS.
Xoghayaha fulinta IGAD Workneh Gebeyehu ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoysaska ciidamada nabad ilaalinta, dowladaha, iyo shacabka Burundi iyo Soomaaliya kadib weerarkii Talaadadii isagoo u rajeeyay kuwa dhaawaca ah in ay bogsadaan.
IGAD waxay kalsooni ku qabtaa in weerarradan aysan waxba u dhimi doonin, waxna ka bedeli doonin go’aanka IGAD iyo saaxiibada caalamka ee ah inay taageeraan dadka Soomaaliyeed si ay u helaan nabad iyo xasillooni waarta,' ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka IGAD kasoo baxay Gebeyehu.
Burundi ayaa Arbacadii sheegtay in 10 ka mid ah ciidamadeeda nabad ilaalinta ah lagu dilay, shan kalena lagu la'yahay weerar ay Al-shabaab subaxnimadii Talaadada ku qaadeen fariisin ay ciidamada Burundi ku lahaayeen deegaanka Ceel-baraf ee gobolka Shabeellada Hoose.
25 ka mid ah askarta Burundi ayaa sidoo kale lagu dhaawacay weerarka, sida uu hadalka u yiri afhayeenka ciidamada Col. Floribert Biyereke.
Dhankiisa, guddoomiyaha guddiga Midowga Afrika Moussa Faki Mahamat, ayaa ku nuux-nuuxsaday in dhacdooyinka noocan oo kale ah aysan dib u dhigi doonin howlgalka nabad-ilaalinta Midowga Afrika ee ka socda Soomaaliya.
Comments Topics: midowga afrika soomaaliya